रुस्लान भोड्काको सहयोगमा ‘शत्रु गते’ युनिटले मोफसल यात्रा गर्दै: के भन्छन् हरी- किरण ? – BRTNepal
रुस्लान भोड्काको सहयोगमा ‘शत्रु गते’ युनिटले मोफसल यात्रा गर्दै: के भन्छन् हरी- किरण ?
बिआरटीनेपाल २०७४ फागुन २२ गते ९:२४ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय गीतसंगीत तथा ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको फिल्म ’शत्रु गते’ ले मोफसल टुर गर्ने भएको छ । मोफसलका दर्शक तथा सञ्चारकर्मीसंग भेटघाट गर्ने उदेश्यले फिल्मको मोफसल टुर गर्न लागिएको हो ।
टुरलाई रुस्लान भोड्काले सहयोग गरेको छ । ’रुस्लान मह शत्रु गते यात्रा २०७४’ नाम दिइएको यस यात्रामा कलाकार हरिवंश आचार्य , किरण केसी , शिवहरी पौडेल , पल शाह , आँचल शर्मा र जुनु रिजाल काफ्ले रहनेछन ।
टुरमा स्थानीय दर्शकलाई विभिन्न प्रस्तुति समेत पस्किने छन् । टुर २३ गते देखि ३० गतेसम्म चल्नेछ । टुर २३ गते हेटौडा , २४ गते नारायणगढ , २५ गते बुटवल , २६ गते पोखरा , २८ गते बिर्तामोड , २९ गते दमक र ३० गते इटहरीमा हुनेछ ।
हरिवंश आचार्य – हामी मोफसल टुरमा पुगेर दर्शक तथा स्थानीय सञ्चारकर्मीसंग भेटघाट गर्न आतुर छौ । यस टुरमा मैले दर्शकसंग साक्षात्कार त गर्ने नै छु साथै आफ्नो प्रस्तुति पनि पस्किने छु । मैले आफ्नो चर्चित गीत संगीत समेत गाउनेछु ।
किरण केसी – टुरमा हाम्रो प्रस्तुति रहनेछ साथै फिल्मको प्रचारप्रसार पनि गर्नेछौ । हामीले आफ्नो प्रचारप्रसार सामग्री त दर्शक माझ पुर्याईसकेका छौ , तर त्यसको प्रभाव के छ भन्ने बुझनको लागि पनि यो टुर आवश्यक रहेको छ । हामी दर्शकको फिडब्याक पनि प्रत्यक्ष रुपमा बुझनको लागि यो टुर गर्न लागेका हौ ।